Is-deji - Gordon Green, Kaniisada Allah Switzerland Adduunyada (WKG)
Dhowr sano ka hor waxaan joogay Harare, Zimbabwe si aan u bixiyo khudbado kaniisad ah. Ka dib markii aan deganahay hudheelkayga, waxaan galabnimadii socod lug ah ku maray waddooyinka caasimada burbursan. Mid ka mid ah dhismayaasha ku yaal bartamaha magaalada ayaa indhaheyga qabtay sababtuna ay tahay qaab dhismeedkiisa. Waxaan ka qaaday dhawr sawir markii aan si kedis ah u maqlay qof qaylanaya: “Hey! Hey Haye halkaa! Markii aan soo jeestay ayaan toos u eegay indhaha askarti oo xanaaqsan. Wuxuu ku hubeysnaa qoriga wuxuuna igu dhejiyay xanaaq. Kadib wuxuu bilaabay inuu qorigayga ku garaaco feeraha oo igu qayliyo: "Meeshu waa goob amni - waa mamnuuc in sawirro laga qaado halkan!" Aad ayaan u baqay. Aag amni bartamaha magaalada? Sidee taasi ku dhacday? Dadku way istaageen oo way na eegeen. Xaaladda way kacsanayd, laakiin yaab, cabsi ma gelin. Si deggan baan ku idhi: «Waan ka xumahay. Ma ogeyn inay jirto meel nabadgelyo oo halkan laga helo. Mar dambe sawiro ma qaadi doono. Qaylada gardarada ah ee askarigu way sii waday, laakiin markay qaylisay codkiisii, codkayga ayaan sii yaraaday. Mar labaad waan raali galiyay. Kadib wax la yaab leh ayaa dhacay. Wuxuu sidoo kale si tartiib tartiib ah hoos u dhigay muggiisa (iyo qorigiisii!) codkiisii ​​wuu beddelay wuuna i dhagaystay halkii uu igu weerari lahaa. Muddo ka dib waxaan la yeelannay wadahadal aad u xiiso badan, kaas oo igu dhammaaday i tusidda dariiqa loo iibiyo dukaanka buugta ee deegaanka!
Markii aan ka tagay oo aan ku laabtay hudheelkayga, hadal aad u caan ah ayaa maskaxdayda ku soo dhacayay: "Jawaab khafiif ah ayaa xanaaqaysa xanaaqa" (Maahmaahyadii 15,1). Dhacdadan foosha xun waxay ahayd markii aan la kulmay saamaynta xiisaha leh ee ereyada caqliga leh ee Sulaymaan. Waxaan sidoo kale xasuustay anigoo duceynaya salaadda subaxdii, oo aan mar dambe idinla wadaagi doono.
Dhaqankeenna caadi kuma ahan in la bixiyo jawaab fudud - waa midda ka soo horjeedda. Waxaa nalagu dhiirrigeliyay "inaan dareennadayada iska daano" oo "sheegno waxa aan dareemeyno". Qoraalka ku jira Maahmaahyada 15,1 waxay umuuqataa inay na dhiirigelineyso inaan wax walba adkeysanno. Laakiin nacas kasta wuu qaylin karaa ama caayaa. Waxay qaadataa dabeecad badan oo badan si aad ula kulanto qof qalloocan deganaansho iyo qabow. Waxay ku saabsan tahay in Masiixu la mid noqdo nolosheena maalinlaha ah (1 Yooxanaa 4,17). Miyuusan taas ka sahlanayn sida la sheegay? Waxaan bartay casharro qiimo leh (oo wali waan baranayaa!) markaan la macaamilayo qof xanaaqsan oo adeegsanaya jawaab fudud.
Ku celi midka kale isla qaddarka lacagta
Miyaanay ahayn markaad qof kula murmeysid inuu kan kale isku deyi doono inuu dib ula dagaallamo? Haddii qofka ka soo horjeedaa uu faallooyin si fiican wax u yiraahdo, ka dib waxaan rabnaa inaan hoos u dhigno. Hadduu qayliyo ama guuxyo, waan ka sii qaylinayaa xitaa haddii ay suurtagal tahay. Qof kastaa wuxuu rabaa inuu haysto ereyga ugu dambeeya, dhufsado ugu dambeyn, ama ku dhufto dhabarjab. Laakiin haddii aan dib u soo celino qoryahayagii oo aan isku dayin inaan tan kale u caddeynno inuu khaldan yahay oo uusan dagaal badan ahayn, markaa kan kale ayaa had iyo goor si deg deg ah u dejiya. Khilaafaadyo badan ayaa lagu kululayn karaa ama si kale loogu sii dheelitiran karaa nooca jawaabta aan bixino.
Cadho qaldan ayaa la saaray
Waxaan sidoo kale bartay in marka qof u muuqdo inuu xanaaqsan yahay, wax had iyo jeer maahan sida aan u maleyno. Darawalka waalan ee kaa gooyay maanta ma uusan toosin saaka iyadoo ujeedku yahay inuu kaa kaxeeyo wadada! Xitaa isagu kuma yaqaan adiga, laakiin naagtiisuu garanayaa wuuna xanaaqay iyada. Waxaad uun u dhacday inaad jidkiisa ku jirto! Awooda adag ee cadhadan ayaa inta badan loo dhigaa macnaha dhacdada kicisay. Dareenka guud waxaa lagu beddelaa caro, jahwareer, niyad jab iyo cadaawad loo qabo dadka qaldan. Taasi waa sababta aan ula macaamilayno darawal gardarade ah wadada, macaamil aan xushmad laheyn oo ku jira diiwaanka lacagta ama madaxa qaylada. Ma tihid midka aad ka waalan tahay, ee ha u xanaaqin xanaaq ahaan shaqsi ahaan!
Sida dadku si qoto dheer u fikiro, isaguna waa isaga
Haddii aan rabno inaan ka jawaabno qof qalloocan jawaabcelin fudud, qalbiyadeenna waa inay marka hore sax ahaadaan. Si dhakhso ah ama waqti dheer, fikradaheena ayaa sida caadiga ah lagu soo bandhigi doonaa ereyadeena iyo dhaqamadeena. Buugga Maahmaahyadu waxay ina baraysaa "Qalbiga xigmadda leh qalbigiisu waxaa lagu gartaa hadalka hadalka" (Maahmaahyadii 16,23). Sida baal biyo ah oo ceel ka socda, carrabkuna wuxuu soo qaadaa waxa qalbiga ku jira oo wuu daadiyaa. Markay ilku nadiif tahay, waa waxa carrabku ku hadlo. Haddii la sumoobo, carrabku wuxuu ku hadli doonaa wasakh. Haddii maskaxdeena ay ku wasakhoobaan fikrado qadhaadh iyo xanaaq, falcelinteena jawaab celinta ah ee ka timaada qofka xanaaqsan waxay noqon doontaa mid adag, falcelis leh iyo aargudasho. Xusuusnow odhaahda: «Jawaabta khafiifka ah waxay xanaaqeysaa xanaaqa; laakiin eray adag ayaa ka farxiya Grimm » (Maahmaahyadii 15,1). Is dhex gali. Sulaymaan wuxuu yidhi: Had iyo goor maskaxda ku hay, oo qalbigaaga hayso, Maxaa yeelay, ku alla kii helayba, noloshooda way noolaadaan, jidhkiisana u bogsiiyaan » (Maahmaahyadii 4,21: 22 Tarjumaadda New Geneva).
Mar kasta oo aan la kulanno qof xanaaqsan, waxaan haysannaa ikhtiyaar sida aan uga jawaabno iyaga. Si kastaba ha noqotee, iskuma dayi karno inaan taas keli ku sameyno oo aan u dhaqanno sida ku habboon. Tani waxay ii keentaa ducadaydii aan kor ku sheegay: «Aabe, fikirkaaga geli maskaxdaada. Erayadaada carrabka ku soo dhig si eraygaagu u noqdo erayadayda. Nimcadaada iga caawi maanta inaan u noqdo sida kuwa kale ee Ciise. » Dadka xanaaqsan waxay u muuqdaan nolosheena markii ugu yaraan aan fileynno. Diyaar u noqo.